Sina diatomite kieselguhr diatomaceous zezika Fanatsarana ny tany fanitsiana granules eto an-tany sy mpanamboatra | Yuantong
Fanatsarana ny tany
diatomite kieselguhr diatomaceous zezika Tany fanatsarana ny tany granules tany
Fanatsarana ny tany, fanampin'ny tany
zezika eto an-tany, zezika eto an-tany
fanatsarana ny tany tsy organika mety
20kg / Kitapo
50000 metritra taonina / metrika isam-bolana
Fonosana: kitapo taratasy 1.Kraft sarimihetsika anatiny 20kg. 2.Export harona harato PP voatenona harona 20 kg. 3.Export fenitra 1000 kg PP voatenona kitapo 500kg .4. Araka ny takian'ny mpanjifa. Fandefasana: 1. Raha ny vola kely (latsaky ny 50kgs), hampiasa express (TNT, FedEx, EMS na DHL sns) izahay, izay mety. 2. Raha ny vola kely (manomboka amin'ny 50kgs ka hatramin'ny 1000kgs), dia hanatitra amin'ny alàlan'ny rivotra na an-dranomasina isika.3. Raha ny vola mahazatra (mihoatra ny 1000kgs) dia matetika no nampitaterina an-dranomasina izahay.
Ny seranan-tsambon'i Shina
Habetsahana (taonina metrika) 1 - 50 > 50
Order avy aminay!
Tombontsoa amin'ny fanatsarana ny tany eto an-tany:
1. Fantatra tsara fa ny silikônina dia ilaina amin'ny fitomboan'ny zava-maniry sy ny faka. Na dia tsy mety levona amin'ny tany aza ny silika tsy amora ao amin'ny firafitry ny tany tsy misy fotony. Na izany aza, tena sarobidy ny sombin-tsolika kely mety levona, izay azo havoaka tsimoramora ary alain'ny fakan'ny zavamaniry, amin'izay dia manatsara ny tsimatimanon'ilay zavamaniry ary manatsara ny fahafahan'ny zavamaniry mahatohitra aretina.
2. Diatomaceous Earth dia mineraly mpitrandraka porous voajanahary, noho izany dia manana ny fitanana rano, fihazonana zezika ary famotsorana maharitra. Mitsitsia rano, mitsitsy zezika, mitsitsy fotoana ary manangona vola.
3. Diatomaceous Earth dia mineraly porous miaraka amin'ny hetsika capillary ary ny fiovan'ny sisin-tany amin'ny vahaolana amin'ny rano sy ny otrikaina, noho izany dia substrate tsara ho an'ny kolontsaina soilless.
4. Diatomite dia poti-poria kely tsy ara-dalàna miaraka amin'ny tsy fahampian'ny famindrana, izay afaka mampihena ny hakitroky ny tany, ny tany malalaka, mampihena ny fitifirana, ary manamora ny fidiran'ny rivotra, ny fivezivezena ary ny fakan'ny zavamaniry.
5. Ny firafitra porous tsy manam-paharoa an'ny tany diatomaceous dia afaka mandray anjara amin'ny tany, mampiroborobo ny fitomboan'ny bakteria mahasoa amin'ity tontolo ity, mandanjalanja ny hamandoana, ny mari-pana ary ny loharanon-tsakafo, ary miaraka amin'izay dia misy fiantraikany amin'ny famonoana bibikely sy aretina, raha mampiasa diatoms Ny tany dia afaka mampitombo ny firoboroboan'ny tany ary mampitombo ny atin'ny oxygen ao amin'ny tany, ka tsy afaka miaina ny bakteria. Izy io dia afaka mamonjy herisetra sy famonoana bibikely betsaka, izay tsy miaro ny tontolo iainana ihany, fa mampihena ny vidin'ny fanasitranana turf sy zava-maniry koa.
6. Koa satria mineraly biôzôjika ny tany diatomaceous, dia zezika tany voajanahary, azo antoka ary sariaka amin'ny tontolo iainana.
Tsindrio ny sary etsy ambony!
F: Ahoana ny fomba hanafarana?
A: STEP 1: Lazao aminay i Plese ireo masontsivana teknika amin'ny antsipiriany ilainao
STEP 2: Avy eo dia misafidy ny karazana fanamoriana fanivanana diatomite marina izahay.
STEP 3: Pls milaza aminay ny fepetra takiana, ny habetsahana ary ny fangatahana hafa.
STEP 4: Avy eo mamaly ireo fanontaniana ireo izahay ary manome tolotra tsara indrindra.
F: Manaiky ny vokatra OEM ve ianao?
F: Afaka manome santionany ho an'ny fitsapana ve ianao?
A: Eny, maimaimpoana ny santionany.
F: Rahoviana no hanao fanaterana?
- Kaomandy amin'ny stock: 1-3 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola feno.
- Kaomandy OEM: 15-25 andro aorian'ny fametrahana.
F: inona ny fanamarinana azonao?
A: ISO, kosher, halal, fahazoan-dàlana hamokatra sakafo, Fahazoandàlana momba ny harena ankibon'ny tany, sns.
F: Manana toeram-pitrandrahana diatomite ve ianao?
A: Eny, manana tahiry diatomite miliion mahery mihoatra ny 100 taonina izay mihoatra ny 75% amin'ireo sinoa voaporofo rehetra tahiry. Ary izahay no mpanamboatra vokatra diatomite sy diatomita biigest any Azia.
Teo aloha: zezika an-tany zezika zezika eto an-tany
diatomite biby mineraly additive feed
Vovon-tany voajanahary voajanahary voajanahary sakafo
Fanariana fanosotra afovoany eto an-tany ...
fambolena sy fiompiana ara-tontolo iainana voajanahary e ...
F30 TL301 akora simika diatomite mahomby Pe ...
vovo-tany diatomita vita amin'ny diatomita